Abenzi beengxowa ezipholileyo kunye nababoneleli - China izinto ezipholileyo zeengxowa zeengxowa
China sasemini ibhegi epholileyo ibhegi mveliso
Isidlo sasemini esicocekileyo / 6 ibhegi epholileyo / igqunyiwe kwisidlo sasemini ngesiphatho kabini esivela eXiamen China. Singomnye wabathengisi beengxowa ezipholileyo eXiamen, China. Sineengcali ezininzi kwiibhegi ezininzi zasemini, ibhegi epholileyo, ibhegi yokuthenga, ibhegi yaselwandle kunye nobhaka njalo njalo.
Inkcazo: ibhegi yesidlo sasemini / ibhegi yesidlo sasemini eyenzelwe abantwana
Iinkcukacha Product: 420D ipholiyesta kunye PEVA / ngefoyile ye-aluminiyam lining. Izinto zokufunda ziya kudlula kuvavanyo lwe-REACH kunye neCa 65. Umbane uya kuba ngumgangatho wokunxibelelana nokutya.
Ipholiyesta yomtya wengxowa yomthengisi mveliso
Umgangatho webhegi epholileyo esemgangathweni / itya yesidlo sasemini / ibhegi yesidlo sasemini ngesiphatho kabini esivela eXiamen China. Singomnye wabathengisi beengxowa ezipholileyo eXiamen, China. Sineengcali ezininzi kwiibhegi ezininzi zasemini, ibhegi epholileyo, ibhegi yokuthenga, ibhegi yaselwandle kunye nobhaka njalo njalo.
Inkcazo: ibhegi yesidlo sasemini / ibhegi epholileyo yesidlo sasemini / ibhegi yesidlo sasemini yabantwana / itote yasemini
ipholiyesta ipikniki ibhegi kupholile China
Umgangatho wepikniki opholileyo webhegi / ibhegi epholileyo epholileyo / ibhegi epholileyo epholileyo / ibhegi yokupholisa enesiphatho kabini kunye nomtya wamagxa eXiamen China. Singomnye wabathengisi beebhegi ezipholileyo ezihamba phambili eXiamen, China. Sineengcali ezininzi kwiibhegi ezininzi zasemini, ibhegi epholileyo, ibhegi yokuthenga, ibhegi yaselwandle kunye nobhaka njalo njalo.
Inkcazo: Ibhegi epholileyo / ibhegi yepikniki epholileyo / ibhegi epholileyo yangaphandle / ipholiyesta ibhegi epholileyo
Iinkcukacha Product: 600D ipholiyesta kunye PEVA / ngefoyile ye-aluminiyam lining. Izinto zokufunda ziya kudlula kuvavanyo lwe-REACH kunye neCa 65. Umbane uya kuba ngumgangatho wokunxibelelana nokutya.
China yonke intengiso OEM ipholiyesta ibhegi sasemini mveliso mveliso
Ipholiyesta kabini isebe lwasemini bag ibhegi mveliso China ukuthengisa yonke OEM
Umgangatho elungileyo wesibini epholileyo yesebe epholileyo ibhegi / Isidlo sasemini itote / igqunyiwe ibhegi sasemini ngesiphatho kabini esivela eXiamen China. Singomnye wabathengisi beengxowa ezipholileyo eXiamen, China. Sineengcali ezininzi kwiibhegi ezininzi zasemini, ibhegi epholileyo, ibhegi yokuthenga, ibhegi yaselwandle kunye nobhaka njalo njalo.
Ipholiyesta ipikniki xa igqunyiwe kupholile ibhegi umthengisi mveliso China ethengisa yonke OEM
Umgangatho olungileyo xa igqunyiwe ibhegi epholile Singomnye wabathengisi beengxowa ezipholileyo eXiamen, China. Sineengcali ezininzi kwiibhegi ezininzi zasemini, ibhegi epholileyo, ibhegi yokuthenga, ibhegi yaselwandle kunye nobhaka njalo njalo.
Inkcazo: ipikniki epholileyo ibhegi / igqunyiwe epholileyo ibhegi / ibhegi epholileyo yangaphandle
Ipholiyesta epholileyo ubhaka kunye noyilo lwefashoni ehlotyeni
Umgangatho olungileyo kunye nebhegi epholileyo ubhaka / isidlo sasemini / ibhegi zigqunyiwe ngesiphatho kabini esivela eXiamen China. Singomnye wabathengisi beengxowa ezipholileyo eXiamen, China. Sigxile kwiindawo ezininzi ezipholileyo, ibhegi yokuthenga, ibhegi yaselwandle kunye nobhaka njalo njalo.
Inkcazo: ibhegi yesidlo sasemini yabantwana kunye nokubuyela esikolweni
Umsebenzi: Gcina ukutya okanye iziselo zibanda okanye zishushu malunga neeyure eziyi-3-4. Ukulungele isikolo, ngaphandle kunye nokunyusa.
Ukupakisha: 1pc / polybag
Isatifikethi: BSCI, FDA, LFGB, REACH, CA65
Ixesha Lead: iintsuku ezingama-40 emva kokuba umyalelo waqinisekisa
Ixesha lokuhlawula: I-TT 30% njengediphozithi kunye nokulingana ngokuchasene nekopi ye-BL okanye ye-LC xa ubona
China mveliso ipholiyesta ipholiyesta ibhegi kunye neepokotho icala umnatha
China fashion ipholiyesta zigqunyiwe ubhaka epholileyo imilo ngeenxa zonke ngaphandle
Umgangatho opholileyo ubhaka opholileyo / imilo ejikelezayo epholileyo ibhegi / igqunyiwe ubhaka opholileyo kunye nomtya we-shouler ophindwe kabini ovela e-China. Singomnye wabathengisi beengxowa ezipholileyo eXiamen, China. Sigxile kwiindawo ezininzi ezipholileyo, ibhegi yokuthenga, ibhegi yaselwandle kunye nobhaka njalo njalo. Le ngxowa yesidlo sasemini zizinto ezintsha zeminyaka ye-2021.
Inombolo Inombolo: ML21024
Inkcazo: igqunyiwe ubhaka kupholile imilo ngeenxa
Iibhegi ezipholileyo ezisemgangathweni / ezi-6 zinokupholisa ibhegi / ingxande yesidlo sasemini esine-strouler strap e-China. Singomnye wabathengisi beengxowa ezipholileyo eXiamen, China. Sigxile kwiindawo ezininzi ezipholileyo, ibhegi yokuthenga, ibhegi yaselwandle kunye nobhaka njalo njalo.
Inombolo Inombolo: ML16034
Umgangatho olungileyo wokuphatha ibhegi epholileyo / i-6 inokupholisa ibhegi / ibhegi yesidlo sasemini ngebhanti ephindwe kabini evela e-China. Singomnye wabathengisi beengxowa ezipholileyo eXiamen, China. Sigxile kwiindawo ezininzi ezipholileyo, ibhegi yokuthenga, ibhegi yaselwandle kunye nobhaka njalo njalo.
Inombolo Inombolo: ML17011